Duqeyn aan weligeed la arag oo ka dhacday Yemen iyo dad badan oo lagu dhameeyay (SAWIRO) - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Duqeyn aan weligeed la arag oo ka dhacday Yemen iyo dad badan oo lagu dhameeyay (SAWIRO)
Ugu yaraan 140 qof ayaa ku geeriyootay tiro 500 ka badane waa ay ku dhaawacantay, kadib duqeyn diyaaradaha isbaheysiga uu hogaaminayo Sacuudiga ay gelinkii dambe shalay u geysteen dad ka qeyb galaayay tacsi lagu dhigaayay dhismo ku yaala magaalada Sanca ee caasimadda dalka Yemen.
Duqeyntaasi ayaa dhacday xilli la sheegay in tacsi loo dhigaayay aabaha dhalay madaxa arrimaha gudaha ee maamulka xuutiyiinta marxuum Jalaal Al-Rawishan, waxaana dadka duqeyntaasi ku geeriyooday u badan maleeshiyaadka xuutiyiinta iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidamada xuutiyiinta.
Weerarkaasi duqeynta ah ayaa la sheegay inay ahayd duqeyntii ugu dhimashada badneyd ebed ee hal meel ka dhacda dalka Yemen, tan iyo markii bishii Maarso ee sanadkii hore 2015-ka ay Xuutiyiinta xoog xilka kala wareegeen dowladda sharciga ee Yemen.
Dhinaca kale, Isbahaysiga uu hogaaminayo Sucuudiga ayaa waxay sheegeen inaysan qaadin wax weerar dhanka cirka ah, waxayna ku tilmaameen inay dhici karto inuu weerarku ka yimid jiho kale.
Afhayeenka golaha ammaanka Qaranka Mareykanka, Ned Price ayaa cambaareeyay duqeyntaasi, wuxuuna sheegay inay jari doonaan taageeradda ay siiyaan isbaheysiga uu hogaaminayo Sacuudiga.
Si kastaba ha ahaatee, diyaaradaha dagaalka ee isbaheysiga uu hogaaminayo Sucuudiga ayaa horey loogu eedeeyay inay dileen boqolaal qof oo rayid ah tan iyo markii ay weerarada cirka ah ka bilaabeen dalka Yemen bishii Maarso 2015-ka.